Amisom oo lagu qarxiyay dulleedka Muqdisho - Muqdisho Online
Home News Amisom oo lagu qarxiyay dulleedka Muqdisho
Amisom oo lagu qarxiyay dulleedka Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo shalay gelinkii dambe Ciidamada AMISOM lagula deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa Miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa warar la helayo ay sheegayaan in uu qabsaday mid ka mid ah Gawaarida Ciidamada AMISOM, gaar ahaan Gaari Taaw ah,waxaana jira khasaaro kala duwan oo uu sababay qaraxaas.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxaas,iyaga oo sheegay inay ku dileen 8 Askari,isl amarkaana burbur xoogan uu gaaray Gaariga oo ka mid ahaa Kolonyo ka tirsan Ciidamada AMISOM oo kusoo jeeday dhinaca Magalada Muqdisho.
Si kastaba weli wax faah faahin ah kama bixin Saraakiisha ciidamada AMISOM Soomaaliya oo ku aadan sheegashada Al-Shabaab ee ah in 8 Askari ay ku dileen qarax ka dhacay deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho.
Previous articleAxmed-kheyr oo la kulmay Werner Schultink
Next articleKaalin intee la eg ayuu ku lahaa kheeyre in uu fashilmo shirkii Garoowe